Hem / Xaqaaga iskoolka	/ Waxaad xaq u leedahay in aad hesho caawinaada aad u baahantahay
Hadii aad u aragto in uu iskoolka kugu adagyahay waa muhiim in aad caawinaad heshaa. Sidoo kale hadii ay maado kugu adagtahay.
Marka ugu horaysa waa in ay macalimiintaadu ay ku caawiyaan. Laakiin waxaa kale oo caawinaad waydiisan kartaa qof kale oo iskoolka ka tirsan. Hadii uusan macalinkaagu dareemin in ay maado kugu adagtahay waa in aad u sheegtaa. Waxaad u sheegi kartaa macalinkaaga ama waalidkaa ama qof kale oo weyn.
Maxaa dhacaya hadii ay hal maado kugu adkaato in aad ku guulaysato?
Hadii ay kugu adkaato hal maado waa in uu ku caawiyaa iskoolka. Iyadoo weliba laguugu xiraynin sababta ay kuugu adkaatay. Tusaale ahaan waxay noqonkartaa in aad xanuunsaneed ama taxlujinti fahamka ay kaa maqnayd ama in aadanba iskoolka ku qanacsanayn. Maadadaa aad dibuga dhacday waxaa sababi kara waxyaabo kale.
Hadii aanad imtixaanka ku helin dhibco badan ama ay kugu adagtahay in aad isku taxalujiso casharka marka aad xisada ku jirto oo ay sababtay taa waa in uu iskoolka ogaadaa waxa sababay. Markaa ka dib ay ku caawiyaan si aad wax u barato marki aad xisada ku jirto. Waa muhiim in uu iskoolku fahmaa sababta ay waxa kuugu adagyihiin hadii kale waxaa laga yaabaa in aanad helin caawinaadi saxda ahayd oo aad u baahnayd.
Waxaa ka mid ah caawinaada aad heli karto waxyaabo aad kuu anfaca ama qaas kuu ah. waxaa waxyaabaha ka mid ah tusaale ahaan sida aad u diyaarin leheyd shaqada iskoolka ama buugaag qaas kuu ah. caawinaada qaaska ah waxay ahaan kartaa in uu ku caawiyo qof taqasus aqooned leh ama qof kale oo kaa caawinkaro waxyaabahaa. Iskoolku waxa uu ku qasban yahay in uu kusiiyo caawinaada aad u baahantahay – taana waxay ka dhigantahay in aad xaq u leedahay caawinaad badan iyo waxyaabo kala duwan oo ka hortag ah.
Hadii xataa aad caawinaad heli weyso
Hadii aad heli weyso caawinaada aad u baahantahay waxaa la hadli kartaa macalikaaga ama qof kale oo weyn oo aad ku kalsoontahay. Markaa qofkaa yaa macalinkaaga la hadlaya ama maamulaha. Dadka waaweyn oo iskoolka jooga waa in ay sameeyaan sida ugu fiican oo macquulka ah si uu adigu iskoolku kuugu fiicnaado.
Hadii aad u dareento in uu maamuluhu ku dhagaysanaynin waxaa la hadli kartaa qofka iskoolka dhan xakuma oo ah madaxa ka sareeya maamulaha. Hadii aad u malayso in aad helin caawinada aad xaqa u leedahay waxaad dacwad u diri karaa anaga oo ah kormeerayaasha iskoolka, wixii dheeri ah ka aqriso halkan: